Aya ndiwo mashandiro ekurara maitiro eIOS 14 anoshanda | IPhone nhau
Imwe yei chii chitsva muIOS 14 ndiyo Kurara Mode uye kuongorora patinenge takarara tichitenda kune iyo iPhone uye Apple Watch. Isu tinotsanangura kuti yakagadzirirwa sei, mashandiro ayo uye kuti iro ruzivo rwarinotipa rinorevei.
1 Kukosha kwekurara
2 Usakanganisa Mode vs. Nzira yekurara
3 Nzira yekurara muIOS 14 uye watchOS 7
4 Relax Mode
5 Kuongorora kurara
6 Iyo Apple Watch, chidimbu chakakosha
7 Imwe nhanho yekutarisira hutano hwedu
Apple inotora imwe nhanho mukucherechedza kwayo hutano hwevashandisi vayo, uye kuongorora kuita kwedu kwepanyama, uye kudzora kurova kwemoyo wedu uye kuonekwa kweAtrial Fibrillation, ikozvino isu tinofanirwa kuwedzera kusimudzira kwetsika dzakanaka dzekurara. Kurara zvakanaka kwakakosha kuti tikwanise kuita zvakakwana zviitwa zvedu zvezuva nezuva, asi zvakare zvakakosha kuhutano hwedu hwepanyama. Zvakawanda uye zvimwe zvidzidzo zvinobatanidza kushaya hope nekufutisa, kuwedzerwa kweropa kana kushushikana, uye zvakadaro chikamu chatisingatombonetseke zvakanyanya nezvacho.
Iyo yekurara yekutarisisa iyo Apple inotipa isu haina kuitirwa kuti itipe isu izere ruzivo rwekuti isu tinorara sei, asi asi kuti tiite kuti tizive nezvekuti tinorara zvakadii uye nekumisikidza zvinangwa zvatinoedza kuzadzisa. Izvo zvakanyanya zve "zvekudzidzisa" basa rekuvandudza maitiro edu pane kukodzera kuongorora., sezvo isina dhata senge mhando yehope dzedu, kana maawa ekurara zvakadzama uye kurara zvishoma, izvo izvo zvimwe zvechitatu-bato zvikumbiro zvinotipa isu. Neye Hardware iyo iyo Apple Watch inayo, kunyanya iyo nyowani Series 6 ine sensor yayo yeO2 Saturation, kunzwa ndekwekuti Apple inogona kupinda zvakadzama mune ino yekutarisa, asi parizvino haisi. Zvichida mushure mekumisikidzwa kweiyo nyowani iPhone 12 tichava nenhau mune izvi, kana pamwe tinofanirwa kumirira iOS 15.
Usakanganisa Mode vs. Nzira yekurara
Chinhu chekutanga chandingade kujekesa musiyano uripo pakati pekuti Usakanganise Mamiriro uye Kurara Maitiro. Iyo yekutanga yanga yave nesu kwenguva yakareba, kunyangwe isingazivikanwe zvachose kune vazhinji vashandisi. Usakanganise Mamiriro chinongova chiitiko chinoita kuti kufona kana kuzivisa zvisativhiringidze pane dzimwe nguva dzatinotsanangura, kana kana tikazvimisikidza nemaoko. Iyo yekurara Mamiriro anoenderera mberi zvakanyanya, uye ndizvo zvaticha tsanangura muchinyorwa chino, uye pakati pesarudzo dzayo dzakawanda ndiyo inosanganisirwa neiyo Usakanganise Maitiro, asi ingori chete yehunhu hwayo.
Nzira yekurara muIOS 14 uye watchOS 7
Kumisikidza kwayo muIOS 14 uye watchOS 7 inogona kuve inyowani, asi kukosha kwayo ndeyekuti tinoigadzirisa kuti iite otomatiki. Zvekugadzirisa isu tinofanirwa kuenda kuchikamu cheKurara cheKushanda kwehutano, uye ipapo tinogona kutsanangura ma parameter ayo edu eApple neApple Watch achashandisa kuzvitarisa patinorara. Chinhu chekutanga kutsanangura chinangwa chekurara, kuwanda kwemaawa atinoda kurara mazuva ese. Munhu mukuru anofanira kurara pakati pemaawa manomwe ne7 pazuva, kunyangwe ichi chiri chinhu chinogona kusiyana zvichienderana nemunhu wega. Kana izvi zvangoitwa, izvo zvinokumbirwa kwatiri ndezvekuti isu tinogadzira maitiro atinotsanangudza kuti inguvai yatinoda kuenda kunorara uye inguvai yatinoda kuti wachi yemaaramu iyerere.
Pano tinogona kuseta akawanda masheduleti kune rimwe nerimwe remazuva evhiki. Sarudzo idzi dzakawanda, kubva pazuva rega rega zvakaenzana zvakaenzana, kuenda kune rakasiyana zvachose zuva rega rega revhiki. Mune yangu nyaya, ndakatsanangura chirongwa chemazuva evhiki (Muvhuro kusvika Chishanu) uye imwe yevhiki. Aya mapatani achave iwo anoratidza ako maitiro zuva nezuva. asi iwe unogona kugara uchichinja alarm yezuva rinotevera, shanduko inongotora kushanda kwezuva iro wozotangazve iyo yakasarudzika pateni. Tichadzokera kumusoro uyu gare gare.
Nguva yekumuka-inoratidza nguva iyo aramu inorira, uye nguva yekurara ndiyo ichaona kuti Kurara Mode kwashandurwa riini. Ko iyo yekurara maitiro inoitei pane yedu iPhone uye Apple Watch? Ngatitangei neiyo iPhone, umo Kurara Mode kuchakonzera iyo yekuvharira skrini ye iPhone yedu inoenda nerima, zviziviso zvinomira kuratidza uye Usakanganise Mamiriro akaitwa. Tinogona kuvhura iyo iPhone kuti tishandise, asi isu tichafanirwa kutora mamwe matanho kupfuura zvakajairwa. Pane iyo yekuvhara skrini ichaonekwa ruzivo nezve mutoro weApple Watch yedu kana iyo nguva iyo alarm yakaiswa, uye nekunongedza kwakananga kune Mapfupi atawedzera.
Aya mapfupi anogona kugadziriswa mukati mekurara menyu yeiyo Hutano app, kana mukati meiyo Shortcuts app. Ndeapi mapfupi atingawedzera? Chero ani watinayo muAppcuts app pane yedu iPhone. Pfungwa ndeyekugadzira mapfupi emabasa atinoshandisa chete patinoenda kunorara, senzira yokudimbudzira inodzima mwenje wese mumba, kana kuti isu tinogadzira iyo podcast yatinowanzoteerera tiri pamubhedha. Isu tinoonawo sarudzo yekuchinja alamu, sekuratidzira kwandakamboita, kwandiri inobatsira zvakanyanya nekuti inzira yekukurumidza yekuchinja alamu mangwanani anotevera pasina kuchinja maitiro akasimbiswa.
Uye paApple Watch? Zvakanaka, chimwe chinhu chakafanana nezvinoitika pane yedu iPhone chinoitika. Iyo yekuratidzira inodzima, kunyangwe pane anogara-pane mamodheru, uye Kana iwe uchiibata, inongoratidzira iyo yazvino nguva uye iyo alarm nguva, uye zvakare inozviita iine hushoma kupenya, kuitira kuti tisakanganisa mumwe wedu pamubhedha. Ehezve, Usakanganise Mode iri kushandawo, uye kana tichida kuvhura iyo Apple Watch isu tichafanirwa kushandura korona kuti tidaro. Kana iyo skrini ikadzima zvakare, ichave yakavharwa zvakare.
Kune zvese izvi zvinoitika kana iyo yekurara nzira yashandurwa isu tinofanirwa kuwedzera iyo Relax Mode. Iyo sarudzo iyo iwe yaunogona kumisikidza kana kwete, uye iyo inosanganisira kufambira mberi kwekurara maitiro pane yako iPhone uye Apple Watch nguva isati yasvika yawakatsanangura kuenda kunorara. Zvakadii kumberi? Izvo iwe zvaunoratidza, mune yangu kesi 45 maminetsi. Mhedzisiro yacho yakafanana nemamiriro ekurara, uye chinangwa ndechekuisa nguva yekudzikiswa usati warara.
Iwo marongero atakatangisa achashanda kune yedu iPhone kutizivisa isu kuti tave kuenda kunorara, chimwe chinhu ndechekuti isu tinozviteerera kana kwete. Kuongorora kurara hakuzotanga kusvikira taenda kunorara, zvekuti kunyangwe isu takagadzirisa kuti na12AM tinoenda kunorara, chete kurara ndiko kuchaverenga patinoenda kwazviri. Sezvazvinoita? Uchishandisa ma sensors eedu iPhone uye Apple Watch.
Iyo iPhone inoshandiswa kutsanangura kuti takareba zvakadii pamubhedha, nepo Apple Watch ichishandiswa kutsanangura kuti tinorara kwenguva yakareba sei. izvi zvinoratidzwa mumagrafu nemaviri mavara: bhuruu rakajeka yenguva yatiri pamubhedha, rima bhuruu yenguva yatinovata. Munguva yese yandakashandisa iyo Kurara Mamiriro, chokwadi ndechekuti ndinofanira kutaura kuti yakanyatsoona kana hope dzambovhiringidzwa, kunyangwe ndikasimuka ndokutora iyo iPhone yakandimaka. Neiyi data, iyo Hutano app inotipa ruzivo rwekuti takarara zvakadii, ndezvipi zvatinoita, pfupiso dzevhiki nevhiki, kurova kwemoyo, nezvimwe Isu tinogona zvakare kuona zuva nezuva kana pamwedzi ruzivo, uye isu tinogona kufamba kuburikidza nenhoroondo.
Iyo Apple Watch, chidimbu chakakosha
Iwe unogona kushandisa iyo yekurara Mode chete neiyo iPhone, asi iyo inorasikirwa ingangoita yese yayo nyasha. Apple yakagadzira nenzira yekuti wachi yako iite basa rakakosha kwazvo, kwete chete kutsanangura maawa atakarara chaizvo, asiwo kuti tibudirire pane iri basa. Kana tikaenda kunorara neApple Watch yedu iripo, alarm inochema pawachi yedu, kwete pa iPhone, kunyangwe isu tinogona kusarudza alarm inongoshandisa iyo haptic mota (vibration) kuitira kuti isavhiringidza chero munhu anorara newe. Kuti tishandise izvi isu tinongofanirwa kutora chenjedzo yekuisa yedu Apple Watch parunyararo patinoenda kunorara.
Zvakakosha iyo Apple Watch zvekuti Apple inozvitora seyakareruka kuti iwe uchaipfeka husiku hwese, kunyangwe iyo Apple Watch ichifungidzira kuti hauzove nebhatiri rakaringana rekugara husiku ichakutumira ziviso usati warara kukuyeuchidza kuchaja wachi. Ndave nenguva ndashandiswa kudzoreredza yangu Apple Watch pandinosvika kumba masikati, pandinenge ndichigadzirira kudya kwemanheru uye ndichiona terevhizheni kwechinguva, ndokupfeka pandinoenda kunorara ne100% yekuchaja. Izvi zvinotonyanya kuve nyore ne Series 6, iyo bhatiri risingangogara kwenguva refu asi richichinjazve munguva pfupi.
Imwe nhanho yekutarisira hutano hwedu
Vazhinji vacharasikirwa nezvimwe maficha mune ino Kurara Mode, kunyanya ichienzaniswa nevamwe yechitatu-bato kunyorera iyo inoputsa iwo maawa aunorara zvinoenderana nekuti iwo akareruka kana akadzika hope, uye kuti vanotaura newe nezve "mhando yekurara". Rudzi rwechirevo ichi rwagara rwuchiratidzika se "chiito chekutenda" kwandiri, handizive kuti ndeapi ma parameter avanoshandisa kuita idzi kuverenga zvisinei nekuti unopfeka Apple Watch Series 3, 4, 5 kana 6. Asi kana chii iwe unoda irwo ruzivo, Parizvino iyi yekurara Mamiriro haisi iyo yauri kutsvaga. Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa, iri basa rinokubatsira iwe kuti uzive kurara kwakadii kwaunorara uye kumisikidza zvinangwa zvekuvandudza chinhu ichi yakakosha pane yako yezuva nezuva chiitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Aya ndiwo mashandiro eIOS 14's Kurara Mode
Mhoroi, ndakaita bvunzo uye ndoda kudzima zuva rekutanga, unoziva kana uchikwanisa?
Ini handioni nzira ... hapana zano